Ra’isulwasaaraha Ciraaq oo ka horyimid aftiga Kurdiyiinta - BBC News Somali
Ra'isulwasaaraha Ciraaq Xaydar Al Cabadi ayaa si rasmi ah u codsaday in ismaamulka Kurdistan ay joojiyaan gabi ahaanba aftida la qorsheynayo in la qabto todobaadka dambe, taas oo dadka lagu weeydiinayo in ay Ciraaq kasii mid ahaadaan, ama la siiyo madaxbanaani oo ay noqdaan dal gaar u taagan.
Maxkamadda sare ee dalkaas ayaa sidoo kale xukuntay in dib loo dhigo aftida illaa inta laga kala cadaynayo arrimaha la xiriira sharci ahaanshaheeda. Hase yeeshee maxkamadda kuma qabsi karto maamulka Kurdiga in ay joojiyaan aftida.
Dhammaan dalalka daneeya arrimaha Ciraaq ee adduunka sida UK, US, Turkiga, Iran iyo Qaramada Midoobay ayaa dhammaantood ka hor yimid go'aanka aftida lagu qaadayo.
Ismaamulka Kurdiyiinta ayaa go'aansaday in ay 23-da bishan Sebtembar dadka gobolkaas degen la weeydiiyo afti ah in ay go'i karaan oo ay noqon karaan dal madax banaan iyo in kale.
Waxaase jira walwal laga qabo in aftidan ay sare usii qaadi karto xasilooni darada Ciraaq ka jirta, islamarkaasna ay hakin karto dagaalka ka dhanka ah Daacish.
Dalalka dariska ah ee Turkiga iyo Iran ayaa labaduba ka cabsi qaba in haddii Kurdistan ay go'do ay taasi dhiirogalin karto in dadka kurdiyiinta ah ee gooni u goosadka ah ee dalalkaas iyaguna ay kacdoonkooda sii xoojiyaan.
Hoggaamiyaha Kurdiga Ciraaq Mascuud Barsani ayaa taageeray aftida. Balse waxa uu intaas ku daray ,in natiijada wax kasta oo ay noqotaba aysan ka dhignayn in ay markiiba ka go'aayaan Ciraaq inteeda kale.
Dad badan oo isugu soo baxay magaalada Irbil ayaa taageeray go'aanka maamulka Kurdiga.
Mid ka mid ah mas'uuliyiinta xisbiga Kurdishtan Democratic Party oo lagu magacaabo Cumad Khosnow ayaa yiri "Waxaan arrintan sugaynay muddo 100 sano ah".
Hase yeeshee xisbiga kale ee mucaaradka ah ayaa kasoo horjeedsaday go'aanka aftida, waxayna sheegeen in xilligan aysan ku haboonayn in afti la qaado.
Xoghayaha gaashaandhigga Britain Michael Fallon ayaa sheegay in maalinta isniinta ah uu la kulmi doono hoggaamiyaha Kurdiyiinta si uu ugu qanciyo in aftida la joojiyo.
Israa'iil ayaa ah dalka kaliya ee si furan u taageeray aftidan, sheegayna in ay dal u aqoonsan doonaan Kurdiga.
Kurdiyiinta ayaa muddo aad u dheer raadinayay madaxbanaani, balse dalalka daris ah iyo Ciraaq lafteeda ayaa caqabad ku ahaa in ay go'aan.
Dadka Kurdiyiinta ayaa boqolkiiba 20% ka ah dadka dalka Ciraaq oo dhan 37 milyan oo qof.
Maraykanka oo Kurdiyiinta Suuirya hubaynaya
Kurdiyiinta oo dagaal ku qaaday bariga Mowsil
US: Turkiga ha joojiyo weeraridda Kurdiyiinta
Yaa ku guuleystay tartanka dib u dhiska Masjidka weyn ee Mowsil?
Maxay salka ku haysaa cunaqabateynta cusub ee Mareykanku ku soo rogay Ruushka?
15 Abriil 2021
Siyaasi isagoo qaawan lagu dhex arkay Zoom